Homeराष्ट्रिय खबरबालेन शाह आज सबैभन्दा धेरै खुशी भएको दिन !
काठमाडौँ – आज बालेन्द्र शाह (बालेन) सबैभन्दा खुशी भएको दिन । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हुनेवित्तिकै देखि फोहोर व्यवस्थापनको समस्याले आजित भएका उनी समस्या समाधान गर्न सहमति भएपछि खुशी भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाहबीच भेटवार्ता भएपछि सारेकारवाला सबैलाई बोलाए । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री देउवाले महानगरपालिका प्रमुख साहलाई समस्या समाधानका लागि साथदिने बचन दिएपछि निर्धक्कका साथ सरोकारवालासँग वार्तामा बसे ।
त्यसको केही घण्टामै समस्याको समाधान भयो । बिहीबार मध्यराती १८ बुँदे सहमति भएपछि फोहोरको समस्या समाधान भएको हो । सिसडोल बञ्चरेडाँडा–कुँडुले ल्याण्डफिल साइडमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न १८ बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार शुक्रबारदेखि फोहोर बिसर्जनमा स्थानीयबाट हुँदै आएको अवरोध हट्ने भनिएको छ भने फोहोर बिर्सन अब रातिको समयमा हुनेछ ।
जेठ २३ गते फोहोर उठाउन दिने भनेर त्रिपक्षीय सहमति भएपनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अवरोध कायम गर्दै आएका थिए । तर, प्रभावित क्षेत्रका तर्फबाट बिहीबार मध्यराति भएको सहमतिपत्रमा ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ र २ का अध्यक्ष तथा धुनिवेशी नगरपालिका वडा नम्बर १ र २ का अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तै महानगरपालिकाको तर्फबाट मेयर बालेन शाह, उपमेयर सुनिता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौता पछि अब आजरातीदेखि फोहोर उठ्ने छ ।
रवि लामिछाने राजनीतिमा – बालेन्द्र शाह बन्ने कि रवीन्द्र मिश्र ?
‘मन्त्री हेरफेर नभए गठबन्धनको आवश्यकता समाप्त हुन्छ’